अन्तर्राष्ट्रीय पैसा पठाउन | USAHello देखि संसाधन | USAHello
यो अन्य देशहरूमा मान्छे पैसा पठाउन सजिलो छ. त्यहाँ पैसा अन्तर्राष्ट्रीय पठाउन धेरै सुरक्षित र छिटो तरिका हो. कसरी छिटो र सुरक्षित अन्य देशहरूमा पैसा पठाउन सिक्न.
MoneyGram वा WalMart2World पैसा पठाउन
MoneyGram र WalMart2World पैसा स्थानान्तरण सेवा तपाईं प्रयोग गर्न सक्छन्. तिनीहरू दुवै संसारमा देशहरूको लगभग सबै काम.
MoneyGram वा WalMart2World मार्फत नगद पठाउन, तपाईं पहिलो तिनीहरूले काम एक स्थान फेला पर्छ. WalMart2World सबै वालमार्ट पसलहरुमा छ. MoneyGram स्थानहरू सुपरमार्केट हो, सुविधा स्टोर, र ग्याँस स्टेशन. तपाईं पहिचान र नगद ल्याउन पर्छ. तपाईं आफ्नो क्रेडिट वा डेबिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्षम छैनन्. तपाईंलाई फेला पार्न सक्छन् पैसा पठाउने कम्पनी र वालमार्ट तपाईं नजिकै स्थानहरू.
तपाईं एउटा बैंक खाता मार्फत पठाउन चाहनुहुन्छ भने, तिमी प्रयोग गर्नसक्छौ WalMart2World अनलाइन सेवा. तपाईं पहिलो अनलाइन खाता सिर्जना गर्न आग्रह गरिनेछ. WalMart2World संग, पैसा मिनेटमा आएको र शुल्क कम छन्. यो शुल्क हो एक निश्चित रकम, वा "समतल शुल्क।" MoneyGram अलिकति अधिक महंगा र ढिलो छ. तर एक राम्रो विकल्प तपाईं एक वालमार्ट यात्रा गर्न सक्षम छन् भने छ.
बैंक पैसा अन्तर्राष्ट्रीय पठाउन
तपाईं अक्सर अन्तर्राष्ट्रीय पैसा पठाउन भने, यो बैंक खाता प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ. आफ्नो घर मा नगद एक धेरै राखन संयुक्त राज्य अमेरिका मा सुरक्षित छैन. यो बैंक खाता खोल्न राम्रो छ. बैंकहरू बारेमा जान्न र बैंक खाता कसरी खोल्न.
यहाँ तपाईं आफ्नो बैंक देखि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पठाउन जान्नु आवश्यक के छ:
तपाईं पैसा पठाउन अघि, तपाईं व्यक्ति पैसा प्राप्त जानकारी आवश्यक हुनेछ. बैंक यस व्यक्ति भनिएको प्राप्तकर्ता. बैंक तपाईं प्रापकको नाम माग्छ, बैँक खाता नम्बर, र कहिलेकाहीं तिनीहरूको ठेगाना.
केही देशहरूमा लागि, तपाईं एक बैंक पहिचान नम्बर आवश्यक हुनेछ. यी IBANs छन् (अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाता नम्बर) वा स्विफ्ट / BIC संख्या. जो प्राप्त छ पैसा आफ्नो बैंक सोध्न तपाईं यो संख्या आवश्यक हुनेछ यदि व्यक्ति छ.
अक्सर, तपाईं अनलाइन आफ्नो बैंक खाता मार्फत पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं मदत चाहिन्छ वा विकल्प हो के पक्का हो भने, आफ्नो बैंक जाने. तपाईं स्वागत सञ्झ्यालमा कामदार कुरा गर्न सक्छन् र तिनीहरूले तपाईंलाई मदत गर्नेछ.
बैंक तपाईं अन्तर्राष्ट्रीय पैसा पठाउनका लागि चार्ज हुनेछ. बनाउन शुल्क बारेमा सोध्न निश्चित (यसलाई कसरी धेरै खर्च हुनेछ).
आफ्नो बैंक मार्फत अन्तर्राष्ट्रीय पैसा पठाउन ढिला हुन सक्छ, धेरै.
वेस्टर्न युनियन संग पैसा पठाउन
वेस्टर्न युनियन एक वित्तीय सेवा कम्पनी हो. तपाईं मार्फत पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो वेबसाइट वा आफ्नो स्मार्टफोन अनुप्रयोग. तपाईं पैसा अनलाइन पठाउन बैंक खाता आवश्यक हुनेछ. तिनीहरूले पनि एक शुल्क चार्ज हुनेछ. तपाईं एउटा बैंक खाता छैन भने, तपाईं अझै पनि पैसा अन्तर्राष्ट्रीय वेस्टर्न युनियन मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं एक पाउन सक्नुहुन्छ स्थानीय शाखा.
एक स्थानीय शाखामा, वेस्टर्न युनियन, तपाईं नगद भुक्तानी गर्न सक्छ. तपाईं पैसा पठाइरहेका छन् व्यक्ति एक बैंक खाता छ छैन भने यो पनि एक राम्रो विकल्प हो. तपाईंको प्राप्तकर्ता तिनीहरूलाई नजिकै एक वेस्टर्न युनियन शाखा छ भने, तिनीहरूले सट्टा पैसा टिप्न सक्षम हुनेछ. तिमीलाई खाचो पर्नेछ:
तपाईंको प्राप्तकर्ता नाम यसलाई आफ्नो सरकार द्वारा जारी आईडी मा देखा
तपाईंको प्राप्तकर्ता गरेको शहर वा शहर, प्रान्त वा राज्य, र देश
सरकारद्वारा जारी गरिएको आईडी
Xoom र Paypal मार्फत पैसा पठाउन
इन्टरनेट वा स्मार्टफोनका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा स्थानान्तरण लागि सबैभन्दा लोकप्रिय सिस्टम Xoom छ. जब तिमी एक Xoom खाता खोल्न, तपाईं थप गर्न अन्तर्राष्ट्रीय पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ 100 सय देशहरूमा र क्षेत्रहरु. को पैसा पठाउन लागत Xoom परिवर्तनहरू मार्फत. कहिलेकाहीं यो एक स्थिर शुल्क छ. कहिले काँही उनि एक प्रतिशत चार्ज. तपाईं पैसा पठाउन बैंक खाता विवरण प्रविष्ट गर्न आवश्यक हुनेछ. तपाईं पठाउँदै हुनुहुन्छ व्यक्ति को विवरण आवश्यक हुनेछ.
Xoom पिकअप स्थानहरू छ, जसको अर्थ तपाईं पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ र कसैले यसलाई अन्य अन्त मा नगद मा टिप्न सक्छ. कहिलेकाहीं, तपाईं पठाइरहेका छन् व्यक्ति केही घण्टामा यसलाई टिप्न सक्छ. केही देशहरूमा लागि, तपाईं बैंक खातामा नगद पठाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं बैंक खातामा पठाउने छ भने, तपाईं जानकारी आवश्यक हुनेछ, धेरै.
तपाईं एक स्मार्टफोन छ भने, तपाईं Xoom अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्छन्. त्यसपछि तपाईं Xoom आफ्नो फोनमा पैसा पठाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
Xoom मात्र मान्छे पैसा पठाउनका लागि छ. तपाईं कारोबार गर्न पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं मार्फत पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ PayPal. PayPal Xoom मालिक.
पैसा पठाउन अन्य तरिकाहरू
तपाईं आफ्नो बैंक खाता देखि एक चेक पठाउन सक्नुहुन्छ. तर केही देशहरूमा यो धेरै गाह्रो विदेशी चेक प्राप्त गर्न बनाउन. विदेशी बैंकहरू तिनीहरूलाई जम्मा गर्न ठूलो शुल्क चार्ज हुनेछ.
एक पैसा आदेश एक चेक समान छ, तर यो पूर्व-अनुमोदित र भुक्तान छ. यो प्रापकको नाम र जानकारी कागज मा पहिले देखि नै छ र परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने हो. अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा अर्डर लागत $8. 55 लागि अप गर्न मान $700 ($500 एल साल्भाडोर र गुयाना लागि). तपाईं बैंकहरू मा पैसा आदेश प्राप्त गर्न सक्छन्, हुलाक कार्यालय, र केही पसलहरु. तपाईं बारेमा थप सिक्न सक्छौं अमेरिकी हुलाक सेवा बाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आदेश.
शुल्क के हुन्?
जब तपाईं अन्तर्राष्ट्रीय पैसा पठाउन, तपाईं शुल्क चार्ज गरिनेछ.
स्थानान्तरण शुल्क तपाईं पैसा पठाउनका लागि भुक्तानी पैसा हो. यो तपाईं पठाउन राशि को एक प्रतिशत हुन सक्छ वा निश्चित रकम हुन सक्छ
विनिमय दर शुल्क
विनिमय दर को मात्रा एक मुद्रा हो (यस्तो अमेरिकी डलर रूपमा) अर्को मुद्रा मा लायक छ (यस्तो यूरो रूपमा). दर सबै समय परिवर्तन. कहिलेकाहीं तपाईं एक मुद्रा विनिमय शुल्क पैसा पठाउनका लागि एक शुल्क रूपमा साथै भुक्तानी. आफ्नो शुल्क व्याख्या गर्न बैंक वा सेवा सोध्न.
अन्तर्राष्ट्रीय पैसा पठाउन को लागि हेर्न कुराहरू
कसरी लागत तुलना: हेर्नु सबै को लागत को. यो तपाईं पैसा बचत हुनेछ.
वितरण समय: सधैं तपाईंलाई थाहा स्थानान्तरण हुनेछ कहिलेसम्म निश्चित हुन. तपाईं आपतकालीन लागि पैसा पठाइरहेका छन् भने, वेस्टर्न युनियन, Xoom, वा Walmart2World आफ्नो सर्वश्रेष्ठ विकल्प हुन सक्छ.
खाता विवरण: खाता र रुटिङ संख्या प्रयोग गर्दा पैसा पठाउने, तिनीहरूलाई धेरै पटक जाँच. तिनीहरूले सही छैन भने, पैसा त्यहाँ छैन.